Iyo Apple Watch 2 inogona kuunza sarudzo dzekuchengetedza | Ndinobva mac
Sezvo imi mese muchiziva, iyo Apple Watch ye chizvarwa chekutanga chine mashoma mashoma ekuchengetedza. Zvakawanda zvekuti zvakashoropodzwa payakaenda kutengeswa gore nehafu yapfuura, kunyangwe pamwe zvaisada kuwanda panguva iyoyo.
Tinotenda izvozvo gore rino ivo vachatitambidza itsva Apple Watch 2 iine akateedzana ezvinhu zvinonakidza kwazvo uye nekuvandudza. Imwe yacho ichave sarudzo yekuwedzera iyo yekuchengetera, sekune iyo iPhone kana iPad. Chekupedzisira, chinhu chega chega cheapuro yakarumwa ichatibvumidza kutora ayo mashandiro zvishoma kumberi uye nekutyora zvipingaidzo zvekugona.
1 Sarudzo mbiri dzekuchengetera yako Apple Watch 2
2 Zvese nezve Apple Watch 2
Sarudzo mbiri dzekuchengetera yako Apple Watch 2
Parizvino sarudzo yega ndeye 8Gb, mune izvo zvinoshandiswa, mapikicha, mimhanzi, nezvimwe. Asi izvo zvinoshanduka, kana zvirinani zvichavandudza. Isu takaona maratidziro akaita Apple uye yakanyoreswa zvigadzirwa zvinoverengeka zvisinganzwisisike neECE. Zvinonzi zvinosvika gumi zvezvigadzirwa izvi yaive Apple Watch, iyo inotisiya tisinganzwisisike sezvo parizvino tine matatu akasiyana maseru ane 10 saizi imwe neimwe, zvichiita huwandu hwese hutatu, kwete 3. Tichichinjisa nyaya takatouya mhedzisiro inonakidza kwazvo, uye izvo ndezvekuti iyo Shanduro inongova nekwanisi yekuchengetedza, asi iyo Yekutarisa neyeMitambo renji yaizouya mune maviri akasiyana mavhezheni.
Izvo zviri izvo, uye kuti usazokanganisa zvakawanda. Iyo Apple Watch 2 mumatunhu ayo akajairika anouya ne8 uye 16Gb sarudzo. Ehezve, ese matatu mamodheru ewatch anozove ari 38 kana 42mm. Tichizvitarisa seizvi, tingave tiine huwandu hwese gumi mamodheru. Iyo Edition haina musoro kukupa iwe sarudzo yekuwedzera kana kushoma yekuchengetera, nekuti kana ukashandisa 10 mauro pawachi hazviite kunge zvakanaka kuudzwa "kwe13.000 euros tinowedzera zvakapetwa kaviri."
Ndine chokwadi chekuti izvi ndizvo zvatichaona mune yakakosha svondo rinouya. Ini ndasuwa kuwedzera kwekuchengetedza uye kuziva Apple haizotipe kwatiri zvakadaroZvichatidhurira kubhadhara iyo yekuwedzera yandisingafunge kuti i100 euros, sekune iyo iPhone, asi € 50. Mumwe mutengo unonzwisisika. Nekudaro, isu tinotenda kuti mitengo yeApple Watch Sport ichatanga pamadhora 299 uye ichakwira € 50 yekuvandudza yega yega. Hwakawanda saizi kana zvimwe zvekuchengetedza.
Zvese nezve Apple Watch 2
Chizvarwa ichi chichava chakachengetedza mukugadzirwa uye netambo. Isu tichaona ingangoita yekushongedza kana kushanda kwehunyanzvi. Vachavandudza, hongu, bhatiri zvakanyanya. Kusvika pamakumi matatu nemashanu muzana padanho rehardware. Kune izvi zvinowedzerwa zvakanyanya kusimba uye zvinoshanda processor. Ichave nesimba risati ramboonekwa mune izvi zvinowedzera uye izvo zvinowedzera izvo zvandakatotaura mukuchengetedza simba. Muviri mutete zvishoma uye kukurira kukuru, zvese kune zvekuvhunduka uye nemvura.
Kune avo vane chizvarwa chekutanga cheichi chishongedzo, ini handingakurudzire kuvandudza kunze kwekunge vapa zvakanyanya kukosha kumabasa ehutano uye vanogona kunyatsotora mukana wenhau, dzisingazove dzakawanda. Zvichida chakakosha ndechekuti pakupedzisira kuenda nekutakura GPS, izvo zvinoita zvine musoro kune iyo Apple Watch, kunyangwe ichizosanganisira yakakwira simba rekushandisa. Zvisinei hazvo ne processor uye nekuwedzera kwakanyanya mubhatiri isu hatizozviona.
Iyo Apple Watch haizove neaya ekuyera ekuyera maficha, kwete kupfuura zvazvingave zviripo parizvino. Mupfungwa iyoyo, bhatiri richiri dambudziko, uyezve kuti rakagadzirirwa kuve wachi uye kwete yemaawa makumi maviri nemana ekuyera. Kune aya marudzi emabasa uye mamwe ane hukama nehutano isu taizofanira kumirira Apple kuti titaure zvipfeko zvitsva uye zvigadzirwa zvitsva muna2017, zvavakatotipa zvimwe zvinoratidza mazuva mashoma apfuura. Ndine tarisiro yekuti gore rinouya rumwe rudzi rweanodhura bhendi kana bracelet ichasvika inoedza kusvika kune chikamu chisiri kutsvaga wachi ine mafomu, asi nyore chishongedzo uye kubva kuApple.
Uri kuronga kuwana iyo Apple Watch 2? Iwe unofungei nezve iyo yazvino pfungwa yatinayo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch 2 inogona kuunza sarudzo dzekuchengetedza
Apple's Austin kambasi yakadzingwa ne solar panel moto